Archivesals Archives - SmartMe
Dom » Ku keydi qeybta 'Tilmaamaha'
Tiknoolajiyada ayaa loo maleynayaa inay tahay qof walba, da 'ahaanna waa tiro kaliya oo aan si gaar ah u fiicneyn;) Waxaan taageersanahay waayeelka waxaanan taageernaa ficilada sida Paweł, tifaftirahayaga, oo sii daayay fiidiyoow uu ku muujinayo sida loo rakibo ...
WE.LOCK - Dib u eegida Smart Lock ee kirada iyo hagaha isku imaatinka!
gerdview, quful smart, tedee, waan xirnaa, quful
Smart Locks ayaa si isa soo taraysa uga soo muuqanaya guryaheena. Laakiin midkani waa ka duwan yahay. Waxay sifiican ugu shaqeysaa kirada. Maaddaama aanan tusin tafatirka dhowaan, maanta waxay noqon doontaa: D
Kulaylka casriga ah - oo ay weheliso xirmada bilowga ee Netatmo
netatmo, Netatmo kululaynta, kululaynta smart
Kuleylka casriga ah wuxuu noqon karaa mid fudud. Saacad ka hor gurigan ma lahayn kuleyl caqli gal ah, laakiin horey ayuu u haystay. Waxaan kugu tusaynaa tan tusaalaha xirmada Bilowga Netatmo!
Sida loo isbarbar dhigo qalabka Xiaomi / Aqara irridda - xitaa haddii aysan ku jirin barnaamijka!
Waxaad iibsatay dareemayaal laakiin kuma jiro barnaamijka oo waxaad u maleyneysaa inay tahay lacag lagu tuuray godka bullaacad? Ha ka welwelin! Waxaa laga yaabaa inay soo noqoto in mahaddii hagahaaga waad ku dari doontaa si kastaba ha noqotee!